June 2014 – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
नेपालले टी-ट्वान्टी क्रिकेट खेल्ने पाउने भयो
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल(आइसिसी)को बैठकले नेपाललाई टी-ट्वान्टी क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रको स्तर प्रदान गरेको छ। मेलबर्नस्थित मुख्यालयमा शनिबार बिहान बसेको बैठकले नेपालका साथ साथै नेदरल्यान्ड्सलाई पनि टी-ट्वान्टी क्रिकेट राष्ट्रको स्तर प्रदान गरेको छ।
आइसिसीको विज्ञप्ति अनुसार १० टेस्ट खेल्ने राष्ट्रसँगै ८ एसोसिएट राष्ट्रले टिट्वान्टी खेल्न पाउनेछन्।
महानायिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र !
Posted on June 10, 2014 February 24, 2016 by Anand
यो चिठी एक प्रियंका कार्कीका एकतर्फी प्रेमी ले प्रियंकाको लागि भनेर लेखेको एक चिठी हो । उनले यो चिठी एक अनलाइनफोरममा पोस्ट गरेका थिए:
आज फेरी मैले हजुर समक्ष मेरा अन्तरमनका भावानाहरु पोख्न जमर्को गरेको छु । हुन् त् केहि बर्ष अगाडी हजुरले मलाइ हजुरको बारेमा केहि नलेखिदिनु भनेर आग्रह गर्नु भएको थियो । तर आज परिस्थिति बदलिएको छ । हिजो हजुर नर्थ अलाबामाको साधारण बिद्यार्थी हुनु हुन्थ्यो भने आज हजुर नेपाल र बिश्व भरिका नेपाली बासिन्दाका हृदयमा बस्ने महानायिका "मेगा स्टार" प्रियंका कार्की हुनु भएको छ । छोटो अवधिमै हजुरको यस्तो प्रगति देखेर म भन्दा ज्यादा शायद अरु कोही पनि खुशी छैन् होला ।
प्रियंकाजी, अवस्य पनि हजुरको मस्तिस्कको कुनै पनि कुनामा मेरो केही अस्तित्व छैन। तर पनि म आफ्नो सानो परिचय दिने दुस्साहस गर्दै छु । कुरो हजुर नेपालमा छँदाको हो । मैले पहिलो पटक हजुरलाइ साइबर संसारको फोटो पेजमा देखे । हजुरको सुन्दर रुप, ति सुकुमार मुस्कान, कोमल र निश्चल नयन….(हे प्रभु, म त् हजुरको रुपको बयान नै गर्न सक्दिन)….फोटो हेर्दा हेर्दै, म त् हजुरको नयन तालमा डुबिसकेको रहेछु ।
समय बित्दै गयो । पछि हजुर पनि अमेरिकाको नर्थ अलाबामामा पढदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाल पाएँ । अब त मैले हजुरलाइ साक्ष्यात दर्शन गर्न पाउने भो भनेर धेरै नै खुशी भएँ । त्यस पछि मैले नर्थ अलाबामा जाने निधो गरेर तेही अनुरुप पैसा जम्मा गर्न थालें । २००८ को समरमा म अलाबामा आउने पक्का भइसकेको थियो तर मैले बर्षौ देखि सजाएर राखेको सपनामा एक्कासी आगो लाग्यो । साइबर संसारमा हजुरले त एक भारतीय नागरिकसंग बिवाह गरिसक्नु भएको कुरो उल्लेख गरिएको थियो । नेपाली भएर होला, भारतीय नागरिक भन्ने बितिकै म त छाँगोबाट खसे सरह भएँ । मनमा आफ्नो कुरो राख्न नसकेर मैले साझा मार्फत हजुरलाइ पहिलो खुल्ला पत्र लेखे । तेही धागोमा पछि धेरै कुराहरु खुलस्त भए । उहा भारतीय नागरिक नभई नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रकाशित भयो । यो सब कुरो चाल पाएर मैले हजुरलाइ नभेट्ने निर्णय गरे ।
समयको अन्तराल संगसंगै, हजुरको बिद्यार्थी जीवनका कुराहरु धेरै सुनिन पुगे । कहिले हजुर नेपाली भएर कलेजमा "धोती" डान्स गर्नु भएको त कहिले चै हजुरले आलाबामाको एउटा धनाध्य "धोति ग्यास ओनर" संग हजुरको अफैर भएको ना ना भाँतीका कुराहरु सुनियो । यस्तो कुरो सुन्दा मलाई ज्यादै नमज्जा लाग्थ्यो । मैले हरेक मौकामा हजुरको साथ् दिएर, सबै कुराहरुलाइ खण्डन गर्थे ।
शायद एक बर्ष पछि होला, हजुरको उही नेपाली नागरिकज्यु संग प्रेम बिवाह भएको खबर मैले साझा मार्फत नै था पाए । साझाका मित्रहरुले बुझिसक्नु भएको थियो मेरो मनमा के बित्यो होला भनेर । तर मैले सबै आशाहरु मारी सकेको थिए । हजुरको खुसियालीमा म धेरै खुसि भएको थिए । बिवाहको फोटो मैले साइबर संसार बाट हेर्ने मौका पाएँ । हजुर त्यो क्षणमा कति धेरै खुसि हुनु भएको थियो, हगि ? पछि हजुर दुवै जना पोखरामा सुहागरात बिताउन जानु भएको फोटोहरु पनि हेरेको थिए मैले । सुहागरात अगाडीका फोटो र तेसपछिको फोटो बिस्लेशण गर्दा, सुहागरात पछिका फोटोहरुमा हजुरको अनुहारमा अर्कै किसिमको उज्यालोपन मैले महसुस गरे । हजुरकै खुसिमा मेरो संसार अड्केको थियो तेसैले हजुरलाई तेस्तो खुसि प्रदान गरिदिनु हुने हाम्रा नेपाली नागरिकज्युलाइ मैले मनमनै धेरै नै धन्यबाद टक्र्याए ।
Posted in Artists, चलचित्र	| Tagged प्रियंका कार्की, Priyanka Karki, Rochak Mainali	| Leaveacomment
बिन्दु परियार – यो हो मेरो सच्चा कहानि
Posted on June 8, 2014 February 24, 2016 by Anand
बिन्दुले यो मेसेज हेम्जाको एउटा क्लबलाइ दिएको बताइएको छ (फोटाहरु भने हामिले थपेका हौँ) ।आजकाल बिन्दुले स्ट्रिप डान्स गर्न छोडेर एउटा रेस्टुराँमा काम गर्न थालेकि छिन । हामिले यो लेख प्राप्त गर्नु अघि पोस्ट गरिएको यो पेजमा बिन्दुका अरु फोटाहरु छन् ।
म बिन्दु परियार , अहिले निकै चर्चाको बिषयमा छु भन्दा केहि फरक नपर्ला । अहिले सम्म मिडियामा जे जस्तो मेरो बारेमा कुरा आए पनि मलाइ त्यसको मतलब छैन । हुन पनि मैले यहाँ अमेरिकामा गरेको काम नेपालि सोसाइटिमा नपच्ला र पच्दैन पनि । अब चर्चाकै चासो र मानिसहरुका खुल्दुलिका लागि यो म्यासेज दिन जरुरि ठान्दछु । पढ्ने बुझ्ने यदि नेपालमा जन्मेका छौ र आमाको दुध पिएका छौ भने यो कुरा अवस्य बुझ्ने छौ । मेरो अमेरिकाबाट सबै जनालाई अब आउने दशै र तिहार को शुभकामना ।
फोटो: सन् १९९८ मा बिन्दु (रातो टोपि लाउने फुच्चि नानि), उनकि आमा र टम सेवेल
म धौलागिरि बोर्डइङ स्कुल बाट S.L.C र ज्ञानुबाबा बाट १२ क्लस उतृण गरि अहिले अमेरिका छु । हो मिडियामा आएको केहि कुरा ठिक पनि छ तर सबै हैन । हेमजा मेरो घर हो । बिष्णु पादुका स्कुल मेरो जिवनको दोस्रो स्कुल हो । पोखराको राम बाराहि स्कुल बाट बिष्णु पादुकामा गए , त्यहाँ मैले ३ क्लस पास गरेपछि मेरो सानु बाउ, जुन आहिले मेरो श्रीमान भनेर चर्चामा छन तेसैले मलाई धौलागिरि बोर्डइङ स्कुलमा पढएको हो । मैले १२ पास गरे पनि मलाइ मिडिया ले S.L.C समेत उतिर्ण नगरेको भन्दा हासो लाग्यो र कता कता रिस पनि, नेपालमा मैले जस्तो लुगा लगएर हिडेपनि, मलाई नराम्रो नजरले हेरे पनि मेरो घर मा आएको मानिसहरुले मलाई म कस्तो खाले केटि हो भन्ने भुझेको छ । मेरो बारेमा मिडियामा आएको कुरा सबै ठीक हैन । हो अमेरिकामा मैले Strip क्लब मा काम गरेको हो र बैश हुने बेला सम्म गर्छु । यो डान्स नेपालमा सायद कुनै जिवनमा पनि गर्न नसकिएला र गर्न पनि नपरोस । हो मैले सेक्स पनि गरेको हो जुन अमेरिका मा लिगल छ यो कुरा नेपालमा सबैलाई थाहा छ । म कुनै नेता वा मन्त्रि होइन भाषण दिनलाइ र दिन पनि चाहन्न ।
नेपाली सेक्सी कथा
Posted in Artists, People	| Tagged Bindu Pariyar	|2Comments